Wararka - Ogow waxa ka socda Thailand
Markii ugu horeysay ee aan imaado Thailand, si adag uma aqaano qof reer Thais ah, hadana mar dambe, waxaa isoo baray asxaabteyda, asxaabta Taiwan ee asxaabteyda ugu horeysa ee Thailand ah Thai Shiine ka dibna qaar ka mid ah soo saarayaasha maxalliga ah. talaabo ahaan, waxaan helnay saaxiibo badan. ”
Markii saaxiibkay, oo si fudud u odhan kara "Savadika", uu markii ugu horreysay yimid Thailand, wuxuu ku dhibtooday inuu la xiriiro darawalka afka Thai ee saboolka ah. Wadooyinka "wali laguma qeexin Khariidadaha Google". Isaga oo maraya meel jaalle ah oo boodh leh oo ku taal UBER, wuxuu arkay dhowr wiishash ah oo wata meerisyo dhul ah oo furan. Ma jiro muuqaal qurux badan oo Thai ah ama muuqaal barwaaqo magaalo leh of waxaas oo dhami waxay ahaayeen waayo-aragnimo oo ah raggii ugu horreeyay ee orodyahanno ah ee tagay Thailand. In kasta oo taraafikada aan fiicnayn, xaaladaha liita, iyo joogitaanka waddan shisheeye, haddana cidina caban ma jirin oo qof walbaa wuxuu iska caawiyey midba midka kale inuu ka gudbo dhibaatooyinka iyada oo ujeedo isku mid ah tahay in mashruuca Runner Thailand lagu gaadho wadada ugu dhakhsaha badan.
Cimilada Thailand waa monsoon kuleyl ah. Heerkulka laga bilaabo Maarso ilaa Maajo waa kan ugu sarreeya sanadka oo dhan, wuxuu gaaraa 40-42 ℃. Asxaabteena ayaa marki hore halkaa soo gaadhay xiliyada dayrta ee xiliyada qabowgu jiro oo ay aad ufudud tahay qabowgu haduu saameeyo isbadalka cimilada. Rag badan ayaa xanuunsaday qaarna xitaa qandho ayey qabeen. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyadda ayaa u horseeday inay la shaqeeyaan jirro maalintii iyo inay cirbad helaan habeenkii ka dibna ay ku soo laabtaan shaqada maalinta ku xigta, waxay ku guuleysteen inay ka badbaadaan waqtiyadaas adag iyagoo gacan ka helaya qof walba.
Cuntada ayaa caqabad weyn ku noqota Shiinaha ku nool Thailand. In kasta oo Thailand ay leedahay takhasusyo badan, dhadhanka guud waa dhanaan iyo basbaas. Si ka duwan mabda'a cunnada Shiinaha ee hal saxan iyo hal dhadhan, cunnada Thai waxay ku leedahay dhanaan iyo basbaas hal saxan oo bixisa dhadhan adag. Intaa waxaa sii dheer, iswaafajinta maaddooyin badan oo ku jira cuntada Thai iyo isticmaalka maaddooyinka kaabayaasha ah ayaa aad uga duwan cuntada Shiinaha. Dhib malahan haddii aad u safartid dhowr maalmood si aad u cuntid, laakiin waxay ku noqon kartaa riyo xun saaxiibbadaa ay tahay inay ka shaqeeyaan Thailand muddo dheer. Kooxdii ugu horreysay ee asxaabta ahayd waxay markii ugu horreysay yimaadeen Thailand waxay cunnooyinka ka cunteeyaan maqaayadaha Shiinaha maalintii, habeenkiina cuntada degdegga ah ee guriga laga keeno waxay ahayd cashadooda, mararka qaarkoodna waxay ku karin jireen cunnadooda qolka jiifka sidoo kale. Nasiib wanaagse, waxaa jira saaxiibo ah cunto kariyeyaal wanaagsan, waxayna noqoneysaa filashada ugu quruxda badan in la wadaago cuntada DIY ee macaan shaqada kadib maalin kasta.
Meesha fog ee xarunta darteed, waa inay u dukaameystaan ​​si ay wax walba u iibsadaan maalmaha fasaxa ah. Dukaameysiga dhammaadka usbuuca wuxuu noqday mid ka mid ah waxqabadyada madadaalada yar ee loogu talagalay ragga orodka ah ee Thailand.
Kaydadka Beddelaha Filterka Biyaha, Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda, Sifeeyaha Biyaha Gudaha, Sifeeyaha Biyaha Guriga Oo Dhan, Isticmaalayaasha Daaweynta Biyaha, Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican,